Markab u raran ganacsato Somali ah oo ku gubanaya dekeda Berbera. [Akhris …] – Radio Daljir
Markab u raran ganacsato Somali ah oo ku gubanaya dekeda Berbera. [Akhris …]
Berbera, Sept 01 – Waxaa lagu guuldarreystay in la damiyo markab u raranaa ganacsto Somali ah oo galinkii dambe ee shalay dab ku qabsaday duleedka magaalada dekedda ah ee Berbera.
Maamulka degmada, kan dekedda, ganacsatada iyo dadweyne isxilqaamay ayaa muddo 14 saaca ka badan la lagdamayey daminta markabkaan waxaana saaka aroortii markabku ku soo xirtay dekedda si looga dajiyo waxoogaa rar ah oo saarnaa dusha sare ee markabka.
Ibraahim Maxamuud Aadan oo ka tirsan ganacsatada Markabku u rarnaa ayaa isagoo aad u murugeysan kuna sugan magaalada Berbera u sheegey idaacadda Daljir in markabka dib loogu celiyey badweynta si uuna khatar u galin dekedda iyo maraakiibta kale.
Ibraahim ayaa sheegey inuusan wax rajo ah ka qabin in markabka la damiyo uuna markabku si aad ah u holcayo.
Dabka ayaa ka dhashay khanka hoose ee markabka waxaana saaran 90% rarkii uu siday oo dhamaanba gubanaya, waxayna wararka hadda soo dhacaya sheegayaan inuu dabku ku sii baahayo qeybaha kale duwan ee markabka.
Markabkaan oo la yiraahdo Maria Star ayaa rarkaan ka soo qaaday imaaradda Dubai waxaana uu siday noocyada kale duwan ee bagaashka, baabuur iyo alaabo kale, waxaana laga dajiyey 60 gaari oo qura iyo wax yar bagaash ah waxayna tani tahay mid ka mid khasaarooyinkii ugu ballaarnaa ee ganacsata Somalidu ay kale kulmaan gaadiidka badda.